sanima bank limited(sanima bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
काठमाण्डौ। सानिमा बैंकको १७ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा सामुदायिक सेवा केन्द्र–नारायणचौर, नक्साल, ब्लड डोनर एशोसिएसन नेपाल (ब्लोदान) र तिनकुनेको कान्तिपुर अस्पताल प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। बैंकको मुख्य कार्यालय अगाडि रहेको नन्दीकेश्वर बगैँचा, नक्सालमा आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय, प्रहरी तथा बैंकका...
सानिमा बैंकद्वारा दीर्घायु बचत खाताअन्तर्गत रु. १० लाख दुर्घटना बीमा रकम हस्तान्तरण
काठमाण्डौ। सानिमा बैंकले सानिमा दीर्घायु बचत खाता अन्तर्गत दिर्घायु तलब बचत खातावालाको परिवारलाई रु. १० लाखको दुर्घटना बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ। यस बैंकका खातावाला राजु लामा तामाङको दुर्घटना भई मुत्यु भएकोले उनको हकवाला श्रीमती कल्पना लामा तामाङलाई सानिमा दीर्घायु तलब बचत खाताअन्तर्गत रु. १० लाख दुर्घटना बीमा रकम एक कार्यक्रमका...
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले प्रधान कार्यालय नक्सालबाट आफ्ना विशिष्ट ग्राहकहरुलाई लक्षित गरी सञ्चालन गर्दै आएको प्रायोरिटी काउन्टर आज मंसिर ५ गतेदेखि ललितपुरको लगनखेलस्थित कुमारीपाटीमा पनि विस्तार गरेको छ। आफ्ना प्रायोरिटी ग्राहकको सेवा र सुविधालाई ध्यानमा राख्दै अभैm गुणस्तरीय सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्नका लागि...
हाइड्रोविज्ञ तुकप्रसाद पौडेल बने सानिमा बैंकको अध्यक्ष
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा तुकप्रसाद पौडेल नियुक्त भएका छन्। बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले पौडेललाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हो । नवनियुक्त अध्यक्ष पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष आफ्नो ओहोदाको सपथ ग्रहण गरेका छन्। पौडेल यसअघि पनि बैंकको संस्थापक...
सानिमा बैंक अब उदयपुरगढीको गढीमा पनि
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आज कात्तिक १६ गते उदयपुरगढीको गढीमा बैंक शाखा स्थापना गरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। गढी शाखाको उद्घाटन उदयपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर केप्छाकी र प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख विशाल दाहालले संयुक्त रुपमा गरेका छन्। उद्घाटन् समारोहमा उदयपुरगढी गाउँपालिका अध्यक्ष केप्छाकीले ग्रामीण...
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आज कात्तिक ४ गतेबाट काठमाण्डौको चपली र भक्तपुरको बालकोटमा बैंक कार्यालय स्थापना गरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। चपली कार्यालयको उद्घाटन बैंकका अध्यक्ष विनयकुमार श्रेष्ठ र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं ७ का अध्यक्ष बसबहादुर महर्जनले संयुक्त रुपमा गरेका छन्। यसैगरी बालकोट कार्यालयको उद्घाटन...
काठमाण्डौ । ब्याजदर युद्धको सुरुवात गर्दै असोजमा निक्षेपको ब्याज बढाउने सनराइज र सानिमा बैंकले अन्य बैंकको करिब ३० अर्ब निक्षेप खोसेका छन् । कात्तिकमा अन्य बैंकले ब्याजदर ह्वात्तै बढाउँदा सिंगल डिजीट कायम गरेर भद्रता देखाउनुपर्नेमा जोड दिएका नेपाल बैंकर्स संघ(एनबीए)का अध्यक्ष समेत रहेका सानिमा बैंकका सीइओ भूवन दाहालकै कारण...
ललितपुरको मंगलबजार र बालकुमारीमा सानिमा बैंकको शाखा विस्तार
काठमाण्डौ। सानिमा बैंक लिमिटेडले आज असोज २४ गतेबाट ललितपुरको मंगलबजार र बालकुमारीमा बैंक कार्यालय स्थापना गरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। मंगलबजार कार्यालयको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर गीता सत्याल र ज्यापू समाज ललितपुरका अध्यक्ष तीर्थलाल महर्जनले एक समारोहका बीच गरे। यस्तै बालकुमारी कार्यालयको उद्घाटन ललितपुर...
सानिमा बैंकको वार्षिक साधारणसभा कात्तिक १४ मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आफ्नो १७ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो कात्तिक १४ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको बालुवाटारस्थित आम्रापाली ब्यांक्वेटमा बिहान ११ जबेबाट भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित च�...
काठमाण्डौ। सानिमा बैंक लिमिटेडले थप तीन स्थानमा शाखा विस्तार गरेको छ। बैंकले हिजो (असोज २१ गते) कपिलवस्तुको जीतपुरमा र आज (असोज २२ गते) काठमाण्डौको मध्यबानेश्वर र भक्तपुरको बोडेमा बैंक कार्यालय स्थापना गरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको हो। जीतपुर कार्यालयको उद्घाटन प्रदेशसभा सांसद विष्णु पन्थी, वाणगंगा नगरपालिकाका मेयर पंकज थारु र...
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आज (असोज १९ गते) काठमाण्डौको गोकर्णेश्वरमा बैंक कार्यालय स्थापना गरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। उक्त कार्यालयको उद्घाटन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसेले गरेका छन्। उद्घाटन समारोहमा मेयर चालिसेले गोकर्णेश्वरमा सानिमा बैंकको कार्यालय सञ्चालनमा आएकोमा बैंकलाई बधाइ ज्ञापन गर्दै सबल...
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आज असोज १५ गते ललितपुरको सानेपा र हरिसिद्धिमा बैंक कार्यालय स्थापना गरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। सानेपा कार्यालयको उद्घाटन ललितपुर महानगरपालिका वडा नं २ का अध्यक्ष राजेशकुमार महर्जन र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालद्वारा संयुक्त रुपमा भएको छ। सो समारोहमा बैंकको नयाँ कार्यालय स्थापना...
काठमाण्डौ। नेपालीको महान चाड दसैँका अवसरमा सानिमा बैंकले ग्राहकका लागि ‘दसैँ धमाका’ योजना सार्वजनिक गरेको छ। अनलाइन सपिङ पोर्टल दराजसँगको सहकार्यमा बैंकको डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्तालाई दराजबाट सामान खरिद गर्दा विशेष छुट प्राप्त हुनेछ। यो योजनाअन्तर्गत सानिमा बैंकको डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ताले दराजबाट सामान खरिद गरी...
काठमाण्डौ । सानिमा बैंक लिमिटेडले आज (असोज ८ गते)बाट विराटनगरको कञ्चनबारीमा बैंक शाखा स्थापना गरी बैंकिङ सेवा विस्तार गरेको छ। उक्त शाखाको उद्घाटन कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा सावधानीका उपायहरु अपनाई ब्रान्ड प्रवर्द्धक वरिष्ठ कलाकारद्वय मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य (मह जोडी) ले संयुक्त रुपमा गरेका छन्।...